Ezona zixhobo zi-8 ziBalaseleyo (zaSimahla) zoPhando lwegama elingundoqo ze-2022 | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 18, 2022 NgoMvulo, Februwari 21, 2022 UAleh Barysevich
Amagama angundoqo ahlala eyimfuneko kwi-SEO. Bavumela ii-injini zokukhangela ukuba ziqonde ukuba uthini umxholo wakho ngaloo ndlela uwubonise kwi-SERP yombuzo ofanelekileyo. Ukuba awunawo amagama angundoqo, iphepha lakho aliyi kufika kuyo nayiphi na i-SERP njengoko iinjini zokukhangela aziyi kukwazi ukuyiqonda. Ukuba unamagama angundoqo angalunganga, ngoko amaphepha akho aya kuboniswa kwimibuzo engabalulekanga, engazisi ukusetyenziswa kubaphulaphuli bakho okanye ukucofa kuwe. Yiyo loo nto kufuneka ukhethe amagama angundoqo ngononophelo kwaye ukhethe awona abalaseleyo.
Umbuzo olungileyo yindlela yokufumana loo magama alungileyo, afanelekileyo. Ukuba ucinga ukuba iya kukubiza intywenka yemali, ke ndilapha ukuze ndikumangalise - uphando lwegama elingundoqo lunokukhululeka ngokupheleleyo. Kule post, ndiza kukubonisa isethi yezixhobo zasimahla zokufumana amagama angundoqo amatsha kwaye ungahlawuli nto. Masiqalise.
UmCwangcisi wegama elingundoqo leGoogle
Umcwangcisi wegama elingundoqo yenye yezinto ezibizwa ngokuba zizitena kunye nodaka lweGoogle izixhobo zophando lwegama elingundoqo. Kulunge ngakumbi ukufumana amagama angundoqo kwimikhankaso yentengiso. Isixhobo kulula ukusisebenzisa - konke okufunayo yiakhawunti yeeNtengiso zikaGoogle ene-2FA (into enyanzelekileyo ngoku). Kwaye naku sihamba. Ukwenza amagama akho angundoqo afaneleke ngakumbi, unokucacisa iindawo kunye neelwimi. Iziphumo zisenokuhluzwa ukuba zingabandakanyi uphendlo oluphawulweyo kunye neengcebiso zabantu abadala.
Njengoko ubona, i-Keyword Planner ikuvumela ukuba uvavanye amagama angundoqo ngokwenani lophando lwenyanga, ixabiso ngokuchofoza, utshintsho lweenyanga ezintathu zokuthandwa, njalo njalo. Into kukuba amagama angundoqo afunyenwe apha akayi kuba zizisombululo ezingcono kakhulu ze-SEO, njengoko isixhobo silungiselelwe ukuhlawulwa, kungekhona imikhankaso yezinto eziphilayo. Eyona nto icace gca kwiseti yamagama angundoqo akhoyo. Sekunjalo, iSicwangciso segama eliPhambili sisiqalo esihle.
Isikhundla Tracker by SEO PowerSuite yisoftware enamandla eneendlela ezingaphezu kwe-20 zophando lwegama elingundoqo phantsi kwe-hood, ukusuka kuGoogle Abantu bayabuza kwiindlela ezininzi zophando ezikhuphisanayo. Ekugqibeleni, oku kukuvumela ukuba uvelise amawaka eembono zamagama angundoqo amatsha kwindawo enye. I-Rank Tracker ikuvumela ukuba uphande amagama angundoqo afanelekileyo kwindawo yakho kunye nolwimi ekujoliswe kulo. Njengoko kusengqiqweni ukuba idatha eqokelelwe kwi-injini yokukhangela e-US ayizukuchaneka kwimibuzo, yithi, isiRashiya okanye isiTaliyane.
I-Rank Tracker ikuvumela ukuba udibanise i-Google Search Console yakho kunye neeakhawunti ze-Analytics kwaye ngokwenene unayo yonke idatha yegama elingundoqo kwindawo enye.
Ukongeza kumagama angundoqo ngokwawo, i-Rank Tracker ifaka iitoni zeemetriki ukukunceda ukuba uvavanye ukusebenza kakuhle kwamagama angundoqo, njengenani lokukhangela ngenyanga, ubunzima begama elingundoqo, ukhuphiswano, i-traffic eqikelelweyo, i-CPC, iimpawu ze-SERP, kunye nezinye ezininzi iiparitha zokuthengisa kunye ne-SEO. .
Umfanekiso weskrini ongezantsi ubonisa imodyuli yeGap yegama elingundoqo, ekuvumela ukuba ufumane amagama angundoqo asele esetyenziswa ngabakhuphisana nabo.
Enye into elungileyo malunga neRank Tracker kukuba abaphuhlisi babo bayamamela into efunwa ngabasebenzisi. Umzekelo, mva nje babuyise i-Keyword Difficulty tab:
Le thebhu ikuvumela ukuba ucofe naliphi na igama elingundoqo kwaye ngokukhawuleza ufumane izikhundla eziphezulu ze-SERP ezili-10 kunye nezibalo zomgangatho wala maphepha.
I-Rank Tracker ikuvumela ukuba ucofe amagama akho angundoqo kunye nenkqubo yayo entsha yokucoca kwaye wenze imephu yegama elingundoqo elipheleleyo. Inani lamagama angundoqo, ngendlela, alinamda.
Phendula iPublic yahluka kakhulu kwezinye izixhobo ezifanayo kwinkcazo kunye nohlobo lweziphumo. Njengoko le generator yegama elingundoqo inikwe amandla yiGoogle Autosuggest, zonke iingcamango ezifunyenwe ngePhendula uLuntu ngokwenene ziyimibuzo ehambelana nombuzo wakho wokuqala. Oku kwenza isixhobo sibe luncedo ngokwenene xa ukhangela amagama angundoqo anomsila omde kunye nemibono emitsha yomxholo:
Ukongeza kwimibuzo, isixhobo sivelisa isethi yamabinzana kunye nothelekiso olunxulumene nombuzo wembewu. Yonke into inokukhutshelwa kwifomathi ye-CSV okanye njengomfanekiso.
Ijenereyitha yegama elingundoqo yasimahla
Umenzi wegama elingundoqo yimveliso ye Ahrefs. Esi sixhobo kulula kakhulu ukusisebenzisa - konke okufunayo kukufaka igama elingundoqo lembewu yakho, khetha injini yokukhangela kunye nendawo, kwaye voila! I-Keyword Generator iya kukwamkela ngeseti yeengcinga ezintsha zegama elingundoqo kunye nemibuzo ehambelanayo kunye neemetrics ezimbalwa ezifana nenani lokukhangela, ubunzima, kunye nomhla wohlaziyo lwedatha yamva nje.
Ijenereyitha yegama elingundoqo ikhupha amagama ayi-100 kunye nemibono yemibuzo eyi-100 simahla. Ukubona ngakumbi, uya kucelwa ukuba uthenge ilayisenisi.
Umdala kakuhle Khangela ikhonsoli izakukubonisa kuphela amagama angundoqo osele uwarensile. Sekunjalo, kukho indawo yomsebenzi oneziqhamo. Esi sixhobo sinokukunceda ukuba ubone amagama angundoqo ongawaziyo ukuba ulungelelanise, kwaye uphucule izikhundla zabo. Ngamanye amagama, iConsole yoPhendlo ikuvumela ukuba ufumane amagama angundoqo angasebenziyo.
Amagama angundoqo angasebenziyo angamagama angundoqo anezikhundla ukusuka kwi-10 ukuya kwi-13. Azikho kwi-SERP yokuqala kodwa zifuna umzamo omncinci wokuphucula ukufikelela kuyo.
I-Console yokukhangela ikwakuvumela ukuba ujonge amaphepha aphezulu ukuze ulungiselele amagama akho angundoqo angasebenziyo, ngaloo ndlela ekunika isiqalo esihle kuphando lwegama elingundoqo kunye nokulungiswa komxholo.
Kwakhona Buziwe, njengoko unokuthelekelela kwigama lesixhobo, itsala idatha kwiGoogle Abantu bayabuza ngaloo ndlela ikwamkela ngeseti yezimvo zamagama angundoqo amatsha. Konke okudingayo kukufaka igama elingundoqo lembewu kwaye uchaze ulwimi kunye nommandla. Isixhobo siya kuthi ke siqhube uphando size sibonise iziphumo njengeseti yemibuzo edibeneyo.
Le mibuzo ngokwenene ilungile-eyenziwe izimvo zomxholo (okanye nezihloko). Into kuphela enokukwenza uzive ukhathazekile kukuba une-10 kuphela uphendlo lwamahhala ngenyanga kwaye awukwazi ukuthumela ngaphandle idatha kuyo nayiphi na ifomathi. Ewe, ukwazile njani, unokubuza. Impendulo yi-screenshots. Ayingombono olungileyo ukubandakanya iifoto-skrini kwiingxelo zabathengi, kodwa yindlela yokuphuma kwiimfuno zomntu. Lilonke, likwaBuziwe ngumvelisi wengcinga emnandi, kwaye izimvo ezinikezelayo zinokuba zilungile kuzo zombini iibhlog kunye namaphulo entengiso.
Igama eliphambili le-Explorer
Igama eliphambili le-Explorer sesinye sezixhobo ezakhelwe ngaphakathi ze-MOZ. Oku kuthetha ukuba uya kufuna iakhawunti ye-MOZ ukusebenzisa isixhobo. Eyona nto ilula. I-algorithm ilula kakhulu - kufuneka ufake igama lakho elingundoqo, ucacise ummandla kunye nolwimi (bahamba kunye kule meko), kwaye nantsi wena. Isixhobo siza kunye nesethi yeengcebiso zegama elingundoqo kunye neziphumo eziphezulu ze-SERP zombuzo wembewu.
Nje ukuba ucofe Jonga zonke iingcebiso kwi Iingcebiso zamagama aphambili Imodyuli, isixhobo siza kukubonisa izimvo zegama elingundoqo eli-1000, ngoko ke uneentlobo ngeentlobo onokukhetha kuzo.
Ngokumalunga neemetrics ze-SEO, awunanto ininzi yokuhlalutya apha - isixhobo sivumela kuphela ivolumu yokukhangela kunye nokufaneleka (umxube wokuthandwa kunye nokufana kwesemantic kwigama elingundoqo lembewu).
Njengokubuzwa kwakhona, i-Keyword Explorer ikunika uphendlo lwasimahla ali-10 ngenyanga. Ukuba ufuna idatha ethe kratya, kuya kufuneka ufumane i-akhawunti ehlawulwayo.
Igama eliphambili lokujonga
Igama eliphambili lokujonga i-plugin ye-Chrome ene-Surfer-powered yamahhala ethi, xa ifakiwe, ibonisa ngokuzenzekelayo idatha yegama elingundoqo kwi-Google SERP njengoko ukhangela nantoni na.
Ngokuphathelele i-SEO kunye neemetriki ze-PPC, i-Keyword Surfer iya kubonisa oku kulandelayo: inani lenyanga lokukhangela kunye neendleko ngokuchofoza kwembewu yombuzo, umthamo wokukhangela, kunye nezinga lokufana kweengcebiso zegama elingundoqo elitsha. Inani leengcebiso liyahluka ngokwe (mhlawumbi?) igama elidumileyo, njengoko ndifumene amagama angundoqo angama-31. Ukutya kwamaNdiya kunye ne-10 kuphela gelato.
Isixhobo asitshintshi indawo ngokolwimi lombuzo ngokuzenzekelayo, kodwa ukhululekile ukuyichaza ngokwakho ukuze ufumane idatha efanelekileyo.
Ukongeza, isixhobo siya kukubonelela ngezibalo zetrafikhi zamaphepha akwi-SERP yangoku kunye nenani lemibuzo echanekileyo abanayo.
Ukongeza kuhlalutyo lwegama elingundoqo, isixhobo sinikezela ukuba uvelise inkcazo yenqaku esekelwe kumbuzo wembewu kunye ne-Surfer AI ithetha. Uphawu oluhle, olunokuba sisiqalo esihle xa usebenza ngomxholo. Sekunjalo, i ulinge ngezixhobo zobuntlola ezenziweyo yabonisa ukuba zonke zisemva kakhulu ngababhali bokwenene abangabantu.
Njengoko ubona, ungafumana amagama angundoqo simahla. Kwaye umphumo uya kukhawuleza, umgangatho omhle, kwaye, yintoni ebaluleke kakhulu, ngobuninzi. Ngokuqinisekileyo, kukho izixhobo ezikhululekile kunye nezixhobo zophando lwegama elingundoqo, ndithathe nje ezo zibonakala zinomdla kwaye ziluncedo. Ngendlela, zeziphi izixhobo zakho ozithandayo? Yabelana ngezimvo.
Ukwazisa: Martech Zone ibandakanya amakhonkco adibeneyo kweli nqaku.
tags: ainaye wabuzaphendula uluntukukubhadla okungeyonyaniizixhobo ze seoo simahlaizixhobo zasimahlaUgcino oluzenzekelayo lukagoogleIsicwangcisi segama eliphambili kuGoogleAmagama aphambili kuGoogleikhonkco lokukhangela kuGoogleubunzima begamaigama eliphambili lokuhlolaumvelisi wegama elingundoqoyophando ngegama elingundoqoigama elingundoqo le-surferamagama angundoqo endaloHlawula ngokucofa kanyeuphando lwe-ppcumkhondo wenqanabaImiqulu yokukhangelaSEOamagama aphambilizixhobosufer ai
UAleh Barysevich nguMsunguli kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso kwiinkampani ezisemva kwe-SEO PowerSuite, isoftware yobuchwephesha yemikhankaso ye-SEO epheleleyo, kunye neAwario, imidiya yoluntu kunye nesixhobo sokujonga iwebhu. Uyingcali ye-SEO enamava kunye nesithethi kwiinkomfa ezinkulu zeshishini, kubandakanya i-SMX kunye neBrightonSEO.